हिमाल खबरपत्रिका | सामुदायिक विद्यालय: खै पुस्तकालय ?
सामुदायिक विद्यालय: खै पुस्तकालय ?
काठमाडौं, कोटेश्वरस्थित सरस्वती माविको पुस्तकालय र प्रयोगशालामा खाँदेर राखिएका कम्प्युटर र अन्य सामग्री । गोपाल गड्तौला
७ कक्षाका विद्यार्थीलाई श्वासप्रश्वास र पाचन प्रणालीबारे बुझाउन प्रयास गरिरहेकी छन्, शिक्षक बसुन्धरा रेग्मी । अलमलमा परे जस्ता देखिने बालबालिकालाई पाठ राम्रोसँग बुझाउन स–चित्र थप सामग्री र प्रयोगात्मक विधिको खाँचो छ । तर, विद्यालयमा त्यस्ता सामग्री त के पुस्तकालय नै छैन । काठमाडौं महानगरपालिका–१० मा रहेको बुद्धनगर आधारभूत विद्यालयकी स्वयंसेवी शिक्षक रेग्मी भन्छिन्, “खासमा यो विद्यालय नाम मात्रको छ ।” एउटा पनि पत्रपत्रिका नल्याइने, खेलमैदान, सभाकक्ष र कम्प्युटर नभएको विद्यालयसँग पुस्तकालय बनाउने योजना पनि छैन । २०५१ सालमा स्थापित विद्यालयमा २४ वर्षदेखि पढाइरहेका प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम नेपाल पाठ्यपुस्तकका कुरा सहायक सामग्रीको मद्दतले प्रयोगात्मक विधिबाट बुझाउँदा सजिलो हुने बताउँछन् । “तर, यत्तिकै चलिरहेको छ”, उनी भन्छन् ।
शिक्षा नियमावली २०७४ को अनुसूची २ अनुसार विद्यालयमा प्रत्येक विद्यार्थी बराबर दुई पुस्तक भएको पुस्तकालय हुनुपर्छ । त्यस अनुसार ८४ विद्यार्थी भएको यो विद्यालयमा कम्तीमा १६८ थान पुस्तक सहितको पुस्तकालय हुनुपथ्र्यो । काठमाडौंको टेकूस्थित महेन्द्र सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा पनि पुस्तकालय छैन । दाता र अभिभावकहरूबाट प्राप्त करीब २०० थान पुस्तक प्रधानाध्यापकको कक्षमा लथालिङ्ग छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक समेत हुने यो कक्षमा विद्यार्थी आउँदैनन् । २२४ विद्यार्थी अध्ययनरत उक्त विद्यालयलाई गत वर्ष महानगरपालिकाले दिएको रु.२६ हजारले कति र कस्ता पुस्तक खरीद गरियो, रेकर्ड समेत छैन ।
राजधानी उपत्यकाका कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरू पुस्तकालयविहीन छन् भने भएकामा पनि उचित व्यवस्थापनको अभावमा पुस्तकको सदुपयोग हुनसकेको छैन । देशकै पुरानोमध्येको भानु मावि (तत्कालीन दरबार हाईस्कूल) स्थापना भएको १६५ वर्ष पुगिसकेको छ । १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पका कारण विद्यालय भवन भत्किएपछि प्रदर्शनीमार्गस्थित वाल्मीकि क्याम्पस हाताभित्र बनेको अस्थायी भवनमा सरेको यो विद्यालयका पुस्तक र दस्तावेजहरू बोरामा कोचेर थुपारिएको छ । सय वर्षभन्दा बढी पुराना सामग्री र देशको शैक्षिक इतिहास केलाउन काम लाग्ने पुस्तक, पाठ्यसामग्रीहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । पुस्तकहरूको रेकर्ड छैन, कम्प्युटरहरूमा बाक्लो धूलो जमेको छ । पढ्ने ठाउँ त छँदै छैन ।
दरबार हाईस्कूल परिसरमै स्थापित संस्कृत माविले २९ असार २०७५ मा १४०औं वार्षिकोत्सव मनाइसकेको छ । भानु माविसँगै वाल्मीकि क्याम्पस हातामा सरेको यो विद्यालयमा संस्कृत र नेपाली भाषाका समेत गरी तीन हजार जति पुस्तक रहेको प्रधानाध्यापक बद्रीप्रसाद दाहाल बताउँछन् । तर, ती सबै पुस्तक बोरामा बन्द छन् । आफ्नो भवन नै नभएको विद्यालयमा पुस्तकालय बनाउने तत्काल कुनै योजना नरहेको प्रधानाध्यापक दाहालको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “विद्यालयले मात्र पुस्तकालय सुधार्न सक्ने अवस्था छैन ।”
काठमाडौंको बागबजारस्थित शहीद शुक्र माविको तेस्रो तलाको एउटा कोठामा केही सय थान पुस्तक भण्डारण गरिएको छ । दाताहरूबाट प्राप्त ६ थान बिग्रिएका कम्प्युटर पनि यही कोठामा थन्क्याइएको छ । विद्यार्थी र शिक्षक आक्कलझुक्कल पुग्ने यो कोठामा बसेर पढ्न जम्मा चार वटा स्टुल छन् । पढ्ने ठाउँको अभावका कारण प्रायः बन्द राख्ने यही कोठालाई विद्यालयले पुस्तकालय भनेको छ । उता विद्यालय भवनको भुइँतलाका २२ वटा कोठा भने पसललाई भाडामा दिइएको छ । प्रधानाध्यापक मञ्जु तुलाधर निर्माणाधीन भवनतिर देखाउँदै भन्छिन्, “नयाँ भवन बनेपछि पुस्तकालय पनि उतै सर्छ ।”
काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित सरस्वती मावि राजधानीमा धेरै विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयमध्येमा पर्छ । एक हजार ७१ विद्यार्थी रहेको विद्यालयको पुस्तकालय चार वटा र्‍याकमा अटाएको छ । त्यही पुस्तकालय पुग्न पनि अप्ठ्यारो सिंढी चढेर तेस्रो तलामा पुग्नुपर्ने हुँदा यो साना नानीहरूको पहुँचमा छैन । पुस्तकालय भन्दा बिजोग अवस्थामा छ विज्ञान प्रयोगशाला । दाताहरूबाट संकलित १७ वटा कम्प्युटर, विज्ञानका चार्ट, काँचका उपकरण र विद्यार्थीले पहिले बनाएका प्रयोगात्मक सामग्री एकै ठाउँमा थुप्रो लागेको छ । प्रधानाध्यापक पुष्प कुँवर चार वर्षदेखि पुस्तकालय र प्रयोगशाला उपयोगविहीन भएको स्वीकार्छन् । दाता वा सरकारबाट सहयोग नजुटे पुस्तकालय र प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न नसकिने निधोमा पुगेका उनी भन्छन्, “आन्तरिक स्रोत नभएकोले विद्यालयसँग अरू उपाय छैन ।”
काठमाडौं बूढानीलकण्ठ नगरपालिकास्थित महाँकाल जनजागृत माविमा पनि पुस्तकालयको हालत उस्तै छ । रुम टु रिड ले २०६८ सालमा दिएका पुस्तकको समेत रेकर्ड छैन यहाँ । साँघुरो कोठामा राम्रोसँग बसेर पढ्न मिल्ने ठाउँ छैन । यसै पनि पठन संस्कृति कम हुँदै गएका बेला विद्यार्थी र शिक्षकलाई समेत आकर्षित गर्न सक्ने राम्रो पुस्तकालयको आवश्यकता महसूस भए पनि स्रोतको अभावमा बनाउन नसकिएको प्रधानाध्यापक पदमबहादुर थापामगर बताउँछन् । विद्यालयमा पुस्तकालय बनाउने मात्रै होइन त्यस्ता पुस्तकालयमा विद्यार्थीको आवश्यकता र रुचि अनुसारका पुस्तक राख्नु पनि जरूरी रहेको बताउँछन्, मदन पुरस्कार पुस्तकालयका अध्येता दीपक अर्याल । उनी भन्छन्, “आवश्यकता र रुचि अनुसारका पुस्तक नभए पठन संस्कृतिको विकास हुनै सक्दैन ।”
२०७२ सालमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । त्यसयता वार्षिक एक हजार विद्यालयमा पुस्तकालय वा सूचना र सञ्चारप्रविधि शीर्षकमा प्रति विद्यालय रु.६ लाख ५० हजारका दरले शिक्षा विभाग मार्फत पठाउन थालिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र देशभरका ७५३ स्थानीय तह मार्फत एक हजार विद्यालयहरूमा कुल ६५ करोड रुपैयाँ पठाइएको शिक्षा विभागको योजना तथा अनुगमन शाखाका प्रमुख घनश्याम अर्याल बताउँछन् । त्यही रकममध्येबाट काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि साउन २०७५ मा रु.१९ लाख ५० हजार रकम आयो । तीन वटा विद्यालयमा पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्नका लागि आएको उक्त रकम महानगरपालिकाले विद्यालय छनोट नगर्दा अहिलेसम्म पनि निकासा हुनसकेको छैन ।
महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका अधिकृत बुद्धि भट्ट अनुमान गर्छन्, “जेठसम्ममा विद्यालय छनोट गरी रकम निकासा होला ।” काठमाडौं महानगरपालिकामा हाल ३१ आधारभूत र ६०माध्यमिक समेत गरी ९१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् भने संस्थागत विद्यालयको संख्या ६४५ छ । ती विद्यालय अनुगमनको काम पनि महानगरपालिकाको शिक्षा विभागकै हो । तर, अधिकृत भट्ट भन्छन्, “जम्मा तीन कर्मचारी भएको अनुगमन इकाइले महानगरभित्रका सबै विद्यालय अनुगमन गर्न भ्याउँदैन, अहिलेसम्म एउटामा पनि पुग्न सकिएको छैन ।”
काठमाडौं बाफलस्थित ज्ञानोदय माविको पुस्तकालय ।
ठूलो हलको बीचमा लामो टेबल छ । टेबलको बायाँतर्फ २० वटा चकटी फराकिलो गरी ओछ्याइएको छ, दायाँतर्फ २२ वटा कुर्सी छन् । चारैतिर भित्तामा र्‍याक बनाइएको छ, र्‍याकभरि पुस्तकहरू सजाइएका । काठमाडौंको बाफलस्थित ज्ञानोदय माविमा रहेको यो पुस्तकालयमा दैनिक कम्तीमा ४५ जना विद्यार्थी र १५ जना शिक्षक पुग्ने गरेको पुस्तकालयको रेकर्डबाट देखिन्छ । पुस्तकालयमा विशेषगरी विद्यार्थीका लागि आवश्यक विभिन्न विषयका करीब पाँच हजार पुस्तक छन् ।
दुई हजार ५४३ विद्यार्थी रहेको यो विद्यालयको कुनै कक्षामा शिक्षक अनुपस्थित भए भने कक्षाका सबै विद्यार्थीलाई पुस्तकालयमा गएर पढ्न अनिवार्य गरिएको प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जन बताउँछन् ।
नियमित पुस्तकालय जाने ७ कक्षाकी छात्रा सोनी महर्जन पुस्तकालयका पुस्तकबाट सामान्यज्ञानका धेरै कुरा जान्न मद्दत पुगेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “कोर्सबुक कक्षामा र आउट नलेजका बुक लाइब्रेरीमा पढ्छु ।” ज्ञानोदयको उक्त पुस्तकालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा शिक्षा विभागबाट रु.६ लाख ५० हजार अनुदान समेत प्राप्त गरेको थियो । उक्त रकम पुस्तकालयको फर्निचर र पुस्तक व्यवस्थापनमा खर्च गरिएको प्रधानाध्यापक महर्जन बताउँछन् ।